राँके–रवि सडक शीघ्र खुलाऊ
बर्सातका कारण तीन सातादेखि अवरुद्ध राँके–रवि सडक अझै पनि खुल्न सकेको छैन। इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको घुर्बिसे पञ्चमीनजिकै मगर भित्तामा पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध भएको छ।
राजनीतिको गलत प्रभाव
यो देशमा राजनीति यत्तिसम्म मौलाउँदै गयो कि यसले प्रभाव नपारेको कुनै क्षेत्र नै रहेन। राजनीति कहाँ गर्ने, कसले गर्ने, आफू कुन ठाउँमा छु, आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा
पेट्रोलियमबारे चुरो कुरा के हो ?
तराईका दलहरूले गरेको आन्दोलन र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी बिर्सन थालिएको छ। तर कहिले काहीं ईन्धन अभाव हुँदा ठ्याक्कै त्यसैको झल्को आउछ। भारतले नाका खोलेको पनि निकै भइसक्यो, तर
बालिकाहरुमाथि बलात्कारका घटनाहरु बढ्नुमा कस्ता पक्षहरु जिम्मेवार छन् र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आगामी दिनमा के–कस्ता पहलहरु आवश्यक देखिन्छन् ? यो विषय अहिले गम्भीर बनेको छ। समाजमा घट्ने कुनै
सवारी दुर्घटनाको भयावह अवस्था
नेपालमा दैनिकजसो दुर्घटनाका खबरहरु आइरहेका हुन्छन्। एक त दुर्घटना आफैँमा हृदयविदारक हुन्छ, साथै दिनहुँ धेरै नेपालीले दुःखद दुर्घटनामा परी अकालमा आफ्नो प्राणको आहुति गर्न बाध्य छन्। कतै चालकको लापरबाही
कति साह्रो धुवाँ–धूलो
विराटनगर सबैभन्दा जेठो शहर र कान्छो महानगरको रुपमा चिनिदै आएको छ। यसको पुरानो परिचय पनि यही हो। अबको नयाँ परिचय राजधानी काठमाडौंजस्तै धुवाँ र धूलोको शहरको रुपमा अगाडि बढिरहेको